Rammer ၏နည်းပညာဆိုင်ရာ Core - Nantong ပုရွက်ဆိတ် Machinery Co. , Ltd မှ
Rammer ၏နည်းပညာဆိုင်ရာ Core
Rammer ကြိမ်နှုန်းမြင့်တုန်ခါမှုနှင့်အတူပစ္စည်းကိရိယာများ tamping တစ်မျိုး, အရာကြမ်းတမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်တယ် အင်ဂျင်ခိုင်ခံ့သောတုန်ခါမှုခုခံရှိပါတယ် requiers ကြောင်းအခြေအနေများ. Rammers ၏တန်ခိုးအရင်းအမြစ်အဖြစ်, ယေဘုယျအားမော်တာများအတွက်သငျ့လျြောမညျမဟုတျ rammer ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဆင်းရဲသားကိုတုန်ခါမှုခုခံ Ang တိုတောင်းသောဝန်ဆောင်မှုအသက်တာ၏. ထိုကွောငျ့, အချို့သောနိုင်ငံခြားထုတ်လုပ်သူ rammers များအတွက်အထူးအင်ဂျင်ထုတ်လုပ်, ဒါပေမယ့်အပိုပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်အလွန်မြင့်မားသည်, နှင့်ပေးပို့အချိန်ကအရမ်းရှည်. persent မှာ rammers အသုံးပြုသောလူကြိုက်အများဆုံးအင်ဂျင်ဟွန်ဒါ GX100 များမှာ, ရော်ဘင်နှင့် GX120 EH12, စသည်တို့ကို. သူများသည်အင်ဂျင်ကျယ်ပြန့် applicated နေကြသည်နှင့်အပိုပစ္စည်းများ convient ထောက်ပံ့နေကြတယ်.
Rammer နွေဦးအပေါ်တစ်ဦးအမြင့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်, နှင့်နွေဦးကိုသံမဏိမြင့်မားသောပင်ပန်းနွမ်းနယ်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်သငျ့သညျ, မဟုတ်ရင်သူကဆုံးရှုံးခဲ့ရတင်းမာမှုရန်လွယ်ကူပါလိမ့်မည်နှင့်ကျေနပ်ဖွယ်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့်ပင်ကျိုးပဲ့မည်မဟုတ်.
3. ပြောင်းလဲနေသော balancing ၏ဒီဇိုင်းနိယာမ
rammer များ၏လှုပ်ရှားမှုကိုအဓိကအားဖြင့်ရွေ့လျားမှု reciprocating ဒေါင်လိုက် High-အကြိမ်ရေ linear ဖြစ်ပါသည်, နှင့်စက်အမြင့်မြင့်မား, ဒါကြောင့်တပြင်လုံးကိုစက်၏ dynamic ဟန်ချက်ကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်, အရာပြောင်းလဲနေသောချိန်ခွင်အထူးပြုဒီဇိုင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းလိုအပ်ပါတယ်, မဟုတ်ရင်စက်မတည်ငြိမ်မှုကိုရိုက်ပါလိမ့်မယ်, ထိန်းချုပ်မှုရန်ခက်ခဲ, ကိုအလွန်အော်ပရေတာများ၏လုပ်အားပြင်းထန်မှုတိုးမြှင့်
prev: EPA ၏အကျဉ်းမိတ်ဆက်
နောက်တစ်ခု: ကွန်ကရစ် Cutter Qg180fx